AHOANA NO AHAFAHANA MANOKATRA WINDOWS 10, RAHA TSY MISY NY FANALAHIDY - 5 FOMBA HIZARANA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Ahoana ny fanamorana Windows 10?
Windows 10 - ny andiany farany amin'ny OS avy amin'ny Microsoft. Ary toa hita fa mitazam-pandrenesana amin'ny ordinatera hatramin'ny ela izany: ny sasany aza dia milaza fa ny sisa rehetra dia ny vaovao farany ihany. Ny fanapahan-kevitra maika dia lasa ny fampidinana ny Windows 10. Andao isika ho marin-toetra, fa tsy ny olon-drehetra no mampiasa fomba ara-dalàna amin'izany, toy ny fividianana fivarotana iray, rehefa misy tambajotra any amin'ny toerana malalaka Windows 10 activator.
Ireto ambany ireto no hiresahako momba ny fomba fampihetsiketsehana samihafa. Ary koa inona no hatao raha tsy mavitrika ny Windows 10.
1. Nahoana no ampiasaina ny Windows 10
2. Ahoana no ahafahanao mampiasa Windows 10?
2.1. Ampidino ny Windows 10 amin'ny finday
2.2. Ahoana no hividianana lakile ho an'ny Windows 10
2.3. Ahoana no hizakana Windows 10 tsy misy fanalahidy
3. Fandaharana mba hizarazarana Windows 10
3.2. Mpikatroka hafa
4. Inona no atao raha tsy mavitrika ny Windows 10?
Nahoana ianao no maneso ny tenanao amin'ny karazana fampiatoana? Ireo dikan-teny taloha dia niasa tsy nisy izany. Raha ny marina, ao anatin'ny "top folo" dia toy izany koa ny fitondrana. Fa andeha hojerentsika izay mitranga raha tsy mampiasa Windows 10 ianao ary miezaka manohy miasa.
Inona no hitranga raha tsy mampiasa Windows 10 ianao
Ny fanovana kosmetika maivana toy ny fandotoana ny birao eo amin'ny sehatry ny birao sy ny fandefasana ny fampandrenesana ny fampiasana ny ilaina atao dia azo antsoina hoe voninkazo. Ny tsy fisian'ny fanohanana ofisialy dia sarotra be ihany koa. Ary eto Ny tsy fahafahana manitsy araka ny tokony ho izy ny tenanao manokana dia efa mipetraka ao amin'ny seza. Saingy ny tsy mampino indrindra dia ny fanarenana tsy tapaka aorian'ny ora vitsy. Ary iza no mahafantatra ny injeniera Microsoft ho tonga amin'ny fanavaozam-baovao manaraka. Noho izany, ny olan'ny fampidirana dia aleo mamaha araka izay haingana.
Ny fametahana ny rafitra miasa dia manome ny fampiasana licence nomerika na fanalahidy 25 karazana.
Fahazoan-dàlana Digital dia ahafahanao miditra Windows raha tsy miditra amin'ny fanalahidy. Ity fomba fiasa ity dia manan-danja amin'ny famerenana maimaim-poana avy amin'ny lisansa "fito" na "valo", miaraka amin'ny fividianana "am-polony" ao amin'ny Windows Store, ary koa ho an'ny mpikirakira ny Testing Insider. Amin'ity tranga ity, ny rafitra dia mavitrika rehefa avy ny fifandraisana amin'ny Internet ary ny angon-drakitra amin'ny servisy Microsoft.
raha Hividy fanalahidy ho an'ny varavarankely 10, dia tokony hiditra amin'ny fangatahana ny rafitra mandritra ny fametrahana azy io. Ny famandrihana dia tanterahana haingana rehefa miditra amin'ny tranonkala manerantany. Toy izany koa, ny fanamarinana dia atao amin'ny fametrahana madio.
Fampitandremana! Tsy maintsy ilaina ny fidirana sy ny fampandrenesana fidirana raha tsy rehefa mametraka famerenana manokana ao amin'ny fitaovana ianao. Ny serivera Microsoft dia hahatsiaro izany ary amin'ny hoavy dia hampiasa automatique ny OS.
Raha tsy misy fifandraisana amin'ny Internet na ny mpizara Microsoft dia sahirana loatra ary tsy mamaly (mitranga izany), dia hiasa izany Windows 10 fidirana amin'ny finday. Avy hatrany dia hilaza aho fa ny fikarohana ny singa mifandraika amin'ny menu sy ny fari-piainana dia maharitra kokoa noho ny manao izany:
mpanao gazety Win + RType slui 4 ary tsindrio ny Enter.
Ny varavarankely iray dia hiseho amin'ny safidin'ny firenena, mifidiana ny anao manokana ary tsindrio ny Manaraka.
Mbola mitoetra ny miantso ny isa izay hanehoana ny rafitra, ary hanaraka tsara ny torolalana avy amin'ny milina fanontana. Aleo vonona ny hanoratra izay lazainao.
Avy eo, midira ny finday fidirana Windows 10 ary tsindrio ny Activate Windows.
Araka ny hitanao dia tsy misy zavatra sarotra.
Raha ilaina ny fanalahidin'ny vokatra ho an'ny Windows 10, ny fanalahidin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny OS OS hafa toa an'i XP dia tsy miasa. Mila ny fehezan-dalàna ankehitriny ianao. Ireto misy fomba sasany ahazoana azy: miaraka amin'ny OS efa voafetra (raha manapa-kevitra ny handehandeha any amin'ny fivarotana amin'ny rakitra) ianao, miaraka amin'ny dika nomerika OS (mitovy ihany, fa ao amin'ny fivarotana ofisialy amin'ny aterineto, ohatra ao amin'ny tranonkala Microsoft), na amin'ny lisitry ny orinasam-pandraharahana na Fametrahana MSDN.
Ny farany amin'ireo safidy ara-dalàna - ny fanalahidin'ny fitaovana, izay amidy amin'ny "folo" ao anaty fiara. Raha ilaina, dia mila miditra amin'ny fangatahana ny rafitra. Raha ny marina, tsy izany no safidy mora indrindra - raha tsy tena mila tablette Windows vaovao na smartphone ianao.
Ary ankehitriny dia hilaza aminao aho hoe ahoana no ahafahanao mampiasa Windows 10. raha tsy misy fanalahidy - izany hoe, ny fomba tsara piraty taloha. Diniho fa araka ny fifanekena momba ny fahazoan-dàlana dia tsy tokony hanao izany ianao, ary amin'ny lalàna ihany koa. Ataovy toy izany koa ny loza mety hitranga.
Noho izany, raha mitady ny fomba hivezivezin'ny Windows 10 ianao raha tsy misy ny fanalahidy ary tsy mividy lisansy ho an'ny vola mahazo vola, dia Mila mpikatroka ianao. Maro amin'izy ireo no eo amin'ny harato, fa misafidiana tsara. Ny zava-misy dia ny mpisoloky dia afaka manamboatra ny viriosy tena izy. Rehefa miezaka mampiasa fampitonana toy izany ianao dia manindry ny rafitra, mety hamoy ny angon-drakitra ianao, ary amin'ny tranga ratsy indrindra dia miditra amin'ny kaonty amin'ny banky ary manadino ny tahiry rehetra avy amin'izany.
Ny fandaharan'asa tsara ho an'ny fampiharana Windows 10 dia handingana ny rafitra fiarovana ary hampifanaraka ny OS, toy ny alika manokona. Ny fandaharana tsara dia tsy hametraka anao dokam-barotra na hampihenana ny rafitra. Ny fandaharana tsara dia voalohany. KMSAuto Net. Voalohany, manavao tsy tapaka sy manatsara izy io. Faharoa, tena mametraka ny fanontaniana amin'ny fomba hivezivezin'ny Windows 10 maimaim-poana sy mandrakizay. Eny na, mandra-pahatongan'ny Microsoft mianatra ny fomba hanakanana azy, ary mandra-panafaka ny dikan-teny vaovao amin'ny mpikatroka. Fahatelo, ny mpamorona ny programa Ratiborus ao amin'ny forum ru-board.com dia manana lohahevitra goavana, izay mamaly fanontaniana ary mametraka dikan-teny maoderina amin'ny asany.
Ho an'ny Windows 10 KMS activator dia azo antsoina hoe fomba tsara indrindra. Voalohany, efa nomanina nandritra ny fotoana ela izy, ka tsy voatery hibodo ny traikefa ny mpanoratra. Faharoa, tsotra ho an'ny mpiserasera tsotra. Fahatelo, mandeha haingana izy io.
Amin'ny fampiatoana ny Windows 10 KMSAuto Net, ny fomba tsara indrindra, araka ny hevitro, ny fandikana ny programa dia tsy mahomby. Mariho fa raha ilaina dia mety mitaky ny Framework .NET (amin'ny ordinatera maro dia efa ao).
Hisarangarako ny endriny fototra:
programa tsotra, tsy mila fahalalana manokana hampiasaina;
misy fomba fohy ho an'ireo izay mila fepetra tsara;
Manamarina ny fisintonana (tampoka ny zava-drehetra miasa ho anao, fa tsy fantatrao);
manohana ny rafitra rehetra manomboka amin'ny Vista ka hatramin'ny 10;
manohana ny dikanteny server an'ny OS;
eny an-dàlana, afaka mametaka MS Office amin'ny dikan-teny ankehitriny;
dia mampiasa fitaovana iray manontolo hampifanaraka ny mekanisma fampihetsiketsehana, ary amin'ny safidy dia mifidy ny tsara indrindra.
Ary nomena torolàlana amin'ny fiteny maromaro, anisan'izany ny teny Rosiana. Izy io dia mamaritra amin'ny an-tsipiriany ny tsy fahampian'ny asa amin'ny fomba samihafa sy fampahalalana hafa.
Noho izany, fomba fampiasana izany. Ity misy dingana dingana amin'ny torolalana.
1. Voalohany, mazava ho azy, maka download ary mametraka. Raha tsy te-hametraka ianao - ravao ny tranonkala portable (portable).
2. Raiso ny programa miaraka amin'ny zon'ny mpamorona: tsindrio ny bokotra ankavanana amin'ny sehon-tsarimihetsika - Fidio ny Run as Administrator.
3. Ny varavarankely lehibe dia misokatra amin'ny bokotra roa - Activation and Information.
4. Ny fampahalalana dia hampiseho aminao ny toetry ny Windows sy ny Office. Raha tadiavinao - ataovy azo antoka fa mila mihetsika ianao.
5. Tsindrio ny Activate. Ny fitaovana dia hifantina ny fomba tsara indrindra ary hizara azy io. Ary manorata ny valiny ao amin'ny saha vokarina eo ambany elatry ny bokotra. Ataovy azo antoka fa vita ny famerenana.
Amin'izao fotoana izao isika dia handamina ny fidirana an-tseraseran'ny automatique - hanangana ny serivisy KMS. Ity dia tolotra manokana izay manolo ny rafitra fiarovana mifandraika amin'ny Microsoft, ka ny fanamarinana ny fanalahidy dia atao amin'ny milina eo an-toerana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny solosaina dia hieritreritra fa efa nekena ny fanamafisana avy amin'i Microsoft, na dia tsy marina aza izany.
6. Tsindrio ny tabilao System.
7. Tsindrio ny bokotra Install KMS-Service. Ny soratra eo amin'ny bokotra dia miova amin'ny "Running", avy eo dia hampahafantarin'ny mpampiasa ny fametrahana ny fahombiazany. Vita, ny rafitra dia mavitrika ary hifandray amin'ny serivisy napetraky ny mpikatroka mba hanamarinana ny sata.
Raha tsy te-hametraka serivisy fanampiny ianao, dia afaka manamboatra Windows Scheduler. Avy eo izy dia hanao fahaleovan-tena ho "fitifirana fitifirana" (averina indray mandeha raha ilaina) aorian'ny andro maromaro voatondro. Raha manao izany ianao, ao amin'ny tabilao System ao amin'ny fizarana Scheduler, kitiho ny bokotra Create Task. Ny mpikatroka dia mety hampitandrina fa hamorona asa iray ao amin'ny lahatahiry programa izy - miombon-kevitra aminy.
Ary ankehitriny misy teny vitsivitsy momba ny fomba haingana. Raha mandeha any amin'ny tablr About ianao ianao ary tsindrio ny bokotra Professional Mode, misy tabilao vitsivitsy hafa ahafahana miseho.
Saingy ho an'ireo liana amin'ny karazan-tsiranoka rehetra toy ny fananganana IP, fa tsy ny valin'ny fanontaniana momba ny fomba hizarazarana Windows 10.
Ao amin'ny tabilao Advanced, afaka mamonjy ny angon-drakitra ianao ary manandrama ny fidirana an-tsehatra.
Ny tabilao Utilities dia ahitana fitaovana maromaro hafa ahafahana manetsika.
Ankoatra ny mpikatroka KMS, dia misy hafa, tsy dia malaza loatra. Ohatra, ny Re-Loader Activator - dia mangataka ihany koa ny. NET, dia afaka mametaka Office, ary dia tsotra ihany koa.
Saingy ny dikanteny Rosiana dia malemy.
Dia mitranga ihany koa fa ny rafitra dia niasa, ary avy eo tampoka dia nipoaka ny fampiatoana ny Windows 10. Raha manana kopian'ny fahazoan-dàlana ianao, dia manana fidirana mivantana amin'ny serivisy fanohanana Microsoft. Azonao atao ny mamaky ny lisitry ny fahadisoana ao amin'ny rohy //support.microsoft.com/ru-ru/help/10738/windows-10-get-help-with-activation-errors.
Raha niasa ilay mpikatroka, dia mila miverina indray ianao. Antivirus dia manakorontana - ampidiro ny rakitra fampiasana sy ny serivisy napetrak'izy io hatramin'ny fisarahana. Amin'ny tranga faratampony dia afeno ny Antivirus amin'ny fotoana fanesorana.
Ankehitriny, afaka manaisotra ny "top folo" ianao. Raha misy zavatra tsy vita - manoratra ao amin'ny fanehoan-kevitra, dia ho hitantsika miaraka.